ယူအေအီးအတွက်ပါကစ္စတန်တို့အတွက်ဂျော့ဘ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကွဲပြားခြားနားသည်။ ငါတို့အများကြီး ယူအေအီးအခြားလမ်းညွှန်များကုမ္ပဏီများသည်ထက် သာ. ကောင်း၏။ ထို့အပွငျကြှနျုပျတို့ကုမ်ပဏီ 2016 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနှင့်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အံ့သြဖွယ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းကြုံတွေ့ ဒူဘိုင်းတွင်စုဆောင်းမှုအတိုင်ပင်ခံ နှင့်အကောင်းဆုံး HR GCC နိုင်ငံများရှိပညာရှင်များ.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ၏တစျခုဖွစျသညျ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလျင်မြန်ဆုံးကြီးထွားလာဒူဘိုင်းအေဂျင်စီအာရှနှင့်ကနေဒါ။ ဒီက, အချို့စစ်မှန်တဲ့ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အာရှအလုပ်ရှာဖွေသူများ ယူအေအီး၌အကြှနျုပျတို့၏ကုမ္ပဏီအသုံးပြုနေသည်။ 80% အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးကျော် ဒူဘိုင်းအတွက်အောင်မြင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာ.
အာရှဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း၏တည်ထောင်ခြင်းဟာအပြိုင်အဆိုင်စျေးကွက်အတွက်ဝယ်လိုအားနှင့်အတူ aligned ဖြစ်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီ မြောက်မြားစွာဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ဖောက်သည်ဝန်ထမ်းများဖြေရှင်းချက်ပေး။ နှင့်များစွာသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ကြီးထွားအခွင့်အလမ်းများကိုပေး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်၏သီးသန့်အုပ်စုများ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းရှိကုမ္ပဏီများ မြို့တော်။ ဤအချက်များအရအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာရှ ်ထမ်းခေါ်ယူမှု စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ယူအေအီးအတွက်အံ့သြဖွယ်စီမံကိန်းများကိုနိုင်ခဲ့သည်။ Creative ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ဤမျှလောက်များစွာသောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေကိုယ်စားလှယ်လောင်းများမှကူညီပေးသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေန်ဆောင်မှုများအထူးဒီဇိုင်းနေကြသည်။ ရိုးရှင်းစွာအဖို့ အိန္ဒိယများအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်အတွက်အကူအညီတောင်းသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီထူးခြားတဲ့ထောက်ပံ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်ဒူဘိုင်းရဲ့ကုမ္ပဏီများမှ။ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့စောင့်ဆိုင်းနေယူအေအီးအတွက်ပါရမီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်အခွင့်အလမ်းများ။
အောက်တွင်ဒူဘိုင်းများအတွက်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ!
ငါတို့သည်သင်တို့၏နောက်ဆုံးရေးသားချိန် CV ကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြသည်
အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ။ အဘို့မသာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ်ထမ်းဆောင်လျက်ရှိသည် ဒူဘိုင်းဒေသခံမော်တော်ယာဉ်အလုပ်အကိုင်များ။ မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးအဖြစ်ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စုဆောင်းနေကြသည် အိန္ဒိယကနေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများ အရာအာရှအလုပ်ရှာဖွေသူများပါဝင်သည်။ ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူများဖြစ်ကြ ယူအေအီးအတွက်ကြိုဆိုပါတယ် ကျနော်တို့များမှာ ကျိန်းသေသာယူအေအီးမှကန့်သတ်မရ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ကာတာနိုင်ငံ, တရုတ်နှင့်ဟောင်ကောင်ကနေအကျိုးဆက်ကိုလည်းအမှုဆောင်အရာရှိကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းရှာကြ၏။ လည်းပဲ တောင်အာဖရိကကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများ။ အတူတကွ USA နဲ့စင်္ကာပူနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့အင်ဒိုနီးရှားကနေကျွမ်းကျင်သူများကူညီပေးနေနေကြသည်။ နှင့်မလေးရှား အလုပ်အကိုင်အမုဆိုးဒူဘိုင်းအတွက်ကြိုဆိုထက်အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း.
ဗီဇာနှင့်အတူဒူဘိုင်းအလုပ်အကိုင်များ မသာဒေသခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် ပါကစ္စတန်ကနေသင်တို့သည်လည်းဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီကနေအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရနိုင်။ ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်၏ရည်ရွယ်ချက်သည်။ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့သည်သုတေသနကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီများအတွက်ပါကစ္စတန်လုပ်သားများအားမရ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျနော်တို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ် ဒူဘိုင်းအသစ်အခွင့်အလမ်းများကိုဘို့သင့်ကိုအားမရ.
ဒူဘိုင်းအနေနဲ့နိုင်ငံတကာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းသည်ဒူဘိုင်းအတွက်အတော်လေးအနိမ့်သည်။ ဒါကြောင့်သင်ကပါကစ္စတန်ကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနှင့်လွှဲပြောင်းသုံးစွဲဖို့ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏နှင့်အတူလျှောက်ထားတဲ့အခါမှာ ကုမ္ပဏီသင်အလွယ်တကူအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်တစ်ခုရနိုင်။ အဆိုပါ HR မန်နေဂျာများနှင့််ထမ်းခေါ်ယူမှုအမှုဆောင်အရာရှိနှင့်အတူချိတ်ဆက်ခြင်းဧရိယာအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရာတွင်တစ်ဦးသော့ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်းမ ယနေ့ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ကျနော်တို့ယူအေအီးမှာအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီတွေရဲ့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ငါတို့သည်လည်းရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အပြည့်အဝလိုင်စင်ရစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့ယူအေအီးအတွက်အထူးအတှေ့အကွုံရှိပါတယ်။ ပါကစ္စတန်ကနေအလုပ်ရှာဖွေရေးရှာဖွေနေသူသုတေသနပြု ပင်လယ်ကွေ့ဂျော့ဘ်။ အထူးအလုပ်ပါကစ္စတန်ကလူယူအေအီးမှအလုပ်ရှာဖွေရေးဘို့လာမယ့်ခွင့်ပြုချက်ရှာဖွေနေအတူ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီလုပ်သားများတင်ပို့ဖို့ကြိုးစား။ ပါကစ္စတန်ကနေရေခြားမြေခြားမှ ဒူဘိုင်းအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများများအတွက်လမ်းညွှန်.
ဒါကြောင့်အခြားလမ်း, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများထားရန်။ တစ်အကွာအဝေးကမ်းလှမ်း ပါကစ္စတန်ကနေအလုပ်ရှာဖွေသူများမှအလုပ်အကိုင်အအကူအညီနဲ့။ ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက် 6,000 HR ကုမ္ပဏီများမှကျော်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ဒူဘိုင်းအတွက်အမြဲတမ်းနေရာချထားန်ဆောင်မှုသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်သဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးပါသည် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနေရာချထားစာချုပ်ဝန်ထမ်းများပါဝင်သည်။ အတူတူဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီအတွက်ဒေသခံကုမ္ပဏီများအတွက်ယာယီဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့အနေနဲ့အလုပ်လုပ်နေကြသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစုဆောင်းမှု Uber နှင့်တက္ကစီဈေးကွက်.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့ပေးတူညီသောလက္ခဏာသက်သေန်ဆောင်မှုအားဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အထိ သေးငယ်တဲ့အာရှကနေစော်ဘွားကုမ္ပဏီတွေကို။ တက် GCC နိုင်ငံများအတွက်ကြီးမားသောနိုင်ငံစုံအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ ထိုသို့သောအံ့သြဖွယ်ကာတာနိုင်ငံနှင့်အတူသင်တန်းဘာရိန်းအဖြစ်။ ကျွန်တော်တို့၏ အမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စုဆောင်းဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများက။ ထိုသို့သောဒူဘိုင်းနှင့်အဘူဒါဘီ၌ပါသောဆီ & ဓာတ်ငွေ့အဖြစ်။ ဒီတော့ယူအေအီးအတွက်ပါကစ္စတန်တို့အတွက်ဂျော့ဘ်သင့်လက်၌ရှိနိုင်ပါသည်။
အဘူဒါဘီ၌ဤမေလစစ်မှန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာအလုပ်အကိုင်အပေမယ့်။ ယူအေအီးအတွက်ပါကစ္စတန်များအတွက်စူပါများမှာ ရေခြားမြေခြားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်လူကြိုက်များ။ ပါကစ္စတန်တို့အတွက်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဘဏ်လုပ်ငန်း & ဘဏ္ဍာရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း။ ဒါ့အပြင်အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိယူအေအီးလည်းရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ, ဒူဘိုင်းအတွက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲ။ လက်ျာအလုပ်ရှာဖွေရေးအတော်လေးရှည်လျားသည်လျှင်ဒါပေမယ့်နေဆဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခြေခံအခွင့်အလမ်းများကိုထုတ်လုပ်ဖော်ပြထားခြင်းဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ အတူတူဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စော်ဘွားအတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်အကိုင်များ.
ပါကစ္စတန်ကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအတွက်အများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား။ အလွယ်ဆုံးကိုရှာဖွေကြောင်း Call Center အခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။ သငျသညျဥပမာကိုသုံးနိုင်သည် ဒူဘိုင်း WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ။ ပါကစ္စတန်လုပ်သားများဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာခံရနိုင်သည့်နေရာများအများကြီးရှိပါတယ်။
အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်မအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါကအများကြီး ပိုပြီးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဒူဘိုင်းအကြောင်းကိုအိပ်မက်။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလအင်ဂျင်နီယာများ၏ဒေသများရှိပိုပြီးအထူးပြုနှင့်အတူစော်ဘွားများခရီးသွားလာ။ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ (အိုင်တီ) ပါကစ္စတန်များအတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ sign up ကိုလျှင်ရရှိနိုင်ကြသည်။ စိတ်ထဲ၌ဤအပြုသဘောဘက်မှာအတူ။ သင်လုပ်နိုင်သည် Sales & Marketing များအတွက်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းရ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအနေအထား။ အတူတူစော်ဘွားအတွက်ဘဏ် HR & အုပ်ချုပ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်အတူဘဏ္ဍာရေး & စာရင်းကိုင်။ ထိုနညျးတူ, သင်ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာဖွေသူအနေဖြင့် အကယ်. သင်ကထိပ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှု & ကော်ပိုရိတ်မဟာဗျူဟာ။
ဆက်သွယ်မှုများအတွက်ကျယ်ပြန့်ကွန်ယက်စွမ်းရည်နှင့်အတူ။ ပါကစ္စတန်အလုပ်ရှာသူများ ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ။ တ ဦး တည်းအရာအဘို့, ငါတို့နှင့်အတူပေါင်းစပ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်အပေါ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အတွေ့အကြုံကို။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပါကစ္စတန်အမှုဆောင်အရာရှိများကိုယူအေအီးတွင်နေရာချထားခဲ့သည်။ အဘို့အသုတေသနပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရှိအတိုင်ပင်ခံအတော်များများ ပါကစ္စတန်များအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်i. ဒူဘိုင်းတွင်အွန်လိုင်းအလုပ်အကိုင်များကိုရှာဖွေရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်။ သငျသညျပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အာရှအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးများအတွက်လုပ်နေတာမှကျူးလွန်သည်ဟုအခြားသော့ချက်အချက်။ ရိုးရှင်းစွာထောက်ပံ့နေသည် အလုပ်အကိုင်အမဲလိုက်န်ဆောင်မှုများအမြင့်မားဆုံးအဆင့်သို့ စံလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအပေါ်အခြေခံပါတယ်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ clients များနှစ်ဦးစလုံးရန်။ ယင်းအတွက်အခြေခံအဘယ်သူသည် အလုပ်ရှင်များနှင့်အလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အအရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အာရှ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအသုံးပြုခြင်းအလုပ်သစ်ကမ်းလှမ်းမှုရတဲ့ပါကစ္စတန်ကလူသည့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ ရိုးရှင်းစွာအနှံ့နှံ့စပ်စပ် စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီများနှင့်သုတေသနနှင့်ချိတ်ဆက်။ သူတို့အခွအေနမြေိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်ပင်ခံအခြေခံစီမံခန့်ခွဲခြင်း။ အလုပ်ကမ်းလှမ်းမှုအဘို့အသီးအသီးကိုယ်စားလှယ်လောင်း fit မှတစ်ခုချင်းစီကိုသင်ရိုးညွှန်းတမ်း Vita တွင်။ ဒူဘိုင်းမှအာရှကနေကျွမ်းကျင်သူများဘို့ငါတို့နေရာချထားန်ဆောင်မှုများ၏နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်သည်။ ဒါကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များပေးခွင့်ပြု ဒူဘိုင်းအတွက်အံ့သြဖွယ်အလုပ်အကိုင်များ။ ကျနော်တို့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ထုံးစံပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးသည့်အခါထည့်သွင်းစဉ်းစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုပြုသောအမှု။ အဖြစ်ကိုယ်ရေးရာဇဝင် upload ကျေးဇူးပြု. ဒူဘိုင်းမြို့အံ့သြဖွယ်ကြီးထွားလာမှုလုပ်ငန်းစဉ်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
မှတ်ချက်ချခဲ့ပြီးသကဲ့သို့ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးငွေပြန်အမ်းပေးခြင်းနေကြသည်။ အဘယ်သူသည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးဆောင်ဖို့နဲ့အလုပ်ရှာမပါဘူးဆန္ဒရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီအဓိကဝန်ဆောင်မှုရိုးရှင်းစွာအချိန်ချွေတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် client များနှစ်ဦးစလုံးသည်။ သူတို့ကိုအားမရရန် ပါကစ္စတန်ကနေဒူဘိုင်းမှ။ ပါကစ္စတန်ကနေဒူဘိုင်းမှအမှုဆောင်အရာရှိလွှဲပြောင်းဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းလမ်းကအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဒါဟာလွယ်ကူပြီးပိုပြီးပြည့်စုံ 2009 ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်။ အရှေ့အလယ်ပိုင်း client များ '' လိုအပ်ချက်ရေရှည်မှာနားလည်မှု၌တည်၏။ နှင့် ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုလိုသူပြည်တွင်းပြည်ပနိုင်ငံများမှကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ ဒါဟာကျနော်တို့အဘူဒါဘီအတွက်အကောင်းဆုံးအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဤအချက်များ, အမှုဆောင်အရာရှိများနှင့်အကျိုးစီးပွား၏စွမ်းရည်များနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းကျော်အတွေ့အကြုံကိုပေးတော်မူ၏။ ကိုသေချာပါလိမ့်မယ် ဒူဘိုင်းမြို့မှအလွန်အကောင်းဆုံးအခွက်တဆယ်ကိုစုဆောင်း ကုမ္ပဏီများသည်။ ကျနော်တို့ယူအေအီးအတွက်အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကဏ္ဍအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ကာတာနိုင်ငံကလေးစစ်သားတကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့်လည်းအိုင်တီကုမ္ပဏီများကကူညီပေးခြင်း။ ငါတို့သည်လည်းဆော်ဒီအာရေဗျအနည်းငယ်ကုမ္ပဏီများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ ရေရှည်, ကျနော်တို့ဒူဘိုင်းရှိလူများအားမရနေကြတယ်.
ယူအေအီးအတွက်ပါကစ္စတန်တို့အတွက်ဂျော့ - ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသင်ပါကစ္စတန်ကနေအလုပ်အကိုင်အရကူညီပေးနိုင်ပါသည် !. ယနေ့ CV တင်ပါ! ဒူဘိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစီးတီးဖြစ်ပါသည်!
အောက်ခြေလိုင်းဖြစ်ပါသည် ပါကစ္စတန်ကနေဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း။ ယခုကြှနျုပျတို့ဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများအနိုင်ရအတွင်း clients များကူညီနေတာပါ။ ကျနော်တို့ပါကစ္စတန်ကုမ္ပဏီများနှင့်မန်နေးဂျင်းစီမံကိန်းကိုဖြစ်ကြသည်။ အမြဲတမ်းပါကစ္စတန်ကနေခွက်ရှာဖွေနေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများတိုးတက်အောင်နေကြတယ် ထိုကဲ့သို့သော WhatsApp ကိုအဖြစ်ပိုကောင်းအလုပ်အကိုင်အကူအညီမှတဆင့်အလုပ်အကိုင်များ။ ! ယူအေအီးကနေအမှုဆောင်အရာရှိသည်။ သင့်ထံမှများမှာဘယ်မှာနေပါစေရှိပါသည်။
အဘယ်သူမျှမကိစ္စရှိရာ လက်ရှိတွင်နေထိုင်နေကျွမ်းကျင်သူများ။ ဤမျှလောက်ရှိပါတယ် အိန္ဒိယများအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို အလုပ်ရှာဖွေသူများ။ ထို့ပြင်လည်းတောင်အာဖရိကနှင့်ပင်အမေရိကန်ကျွမ်းကျင်သူများအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေနိုင်ကြသည်။ ဒါကြောင့်အဘယ်သူမျှမကယ့်ကိုအကောင်းဆင်ခြေလည်းမရှိ။ နီးပါးမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဒူဘိုင်းထဲတွင်နေရာနိုင်ပါသည်။ နယူးကလူနေပါစေသင်ကပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာစော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာထည့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ကျိန်းသေယူအေအီးအသစ်လုပ်သားများနေရာကဒီမှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေအများကြီးကဤငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများမှာရှာဖွေနေစကားပြောခြင်း။ တစ်ဦးက Careerjet ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့က်ဘ်ဆိုက် နှင့် Monster ပင်လယ်ကွေ့ကုမ္ပဏီ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ပါကစ္စတန်များအတွက်ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ဂျော့ဘ်ကိုရှာခက်ခဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပါကစ္စတန်ကလူကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအသုံးပြုရန်အတွက်ချစ်ကြတယ်။ တန်ဖိုးထားဒူဘိုင်းကုမ္ပဏီများ အာရှအလုပျသမား နှင့်ဗီဇာနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုမရှိ။ ကျနော်တို့ဖန်တီး ဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်များနှင့်အာရှအလုပ်မုဆိုးများအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကို။ အလုပ်ရှာဖွေရေးရှာဖွေနေသူယခုဒူဘိုင်းဘို့ငါတို့လမ်းညွှန်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ယူအေအီးအတွက်ပါကစ္စတန်များအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်လုပ်နိုင်သည် မိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှုဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်။ ဒူဘိုင်းမှလာမယ့်သူဤမျှလောက်များစွာသောသစ်ကိုကျွမ်းကျင်သူများရှိပါတယ်။ သည်အချို့အလုပ်အကိုင်သေချာပေါက်မတှေ့ ကျွမ်းကျင်သူများဒူဘိုင်းကူးလာ။ ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေတာမဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီဒူဘိုင်းလမ်းညွှန်နှင့်သတင်းအချက်အလက် created အဘယ်ကြောင့်ဒီအဖြစ်ပါတယ်။ ပင်စော်ဘွားများသွားရောက်မတိုင်မီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူများကိုကူညီအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေပါ။
တစ်ဦးရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျားခြင်းနှင့်အလုပ်ရှာဘို့ပြည့်စုံလမ်းညွှန်. နယူးအလုပ်ရှာဖွေသူများ့အလုပ်ကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲရည်မှန်းထားပါသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကဒီမှာ အလုပ်ရှာနေသူမဆိုပြည်ပရှိကူညီရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ WhatsApp ကိုဒူဘိုင်းအုပ်စုများကယ့်ကိုလူတိုငျးအတှကျဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ကြသည်။ ဒါကညီညွတ်သောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာထည့်ထားခံရဖို့တစ်စမတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်လုပ်သားများနိုင် ဒူဘိုင်းဟိုတယ်တစ်ခုအလုပ်အမှုဆောင်အဖြစ်ကိုလည်းအလုပ်အကိုင်အရှာတွေ့။ သငျသညျအများအပြားကဏ္ဍများတွင်အလုပ်အကိုင်အများအတွက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်တစ်ခုကျွမ်းကျင်သူများသကဲ့သို့သင်တို့ဒါ။ ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကိုလန်ဘိုအလုပ်အကိုင်ကုမ္ပဏီ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒူဘိုင်းသာငှားရမ်း, အလုပ်ရှာဖွေသူများနေရာရှာနေကြသူတခြားနိုင်ငံတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ တော်တော်များများရှိပါတယ် အလုပ်ရှာဖွေသူများကိုစုဆောင်းဆော်ဒီအာရေဗျကုမ္ပဏီများမှ.
ပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများတွင်အလုပ်လုပ်သည် စူပါကောင်းကောင်းပေးဆောင်သည်။ ဥပမာ, ဒူဘိုင်းအတွက်အလွန်အမင်း paid ဘဏ်လုပ်ငန်းအလုပ်အကိုင်များ။ ပင်လယ်ကွေ့ထဲမှာမသာအသစ်သောလူတို့အဘို့ဤမျှလောက်များစွာသောအခွင့်အလမ်းများရှိပါသည်။ ဒါ့အပြင်ဒူဘိုင်းမြို့ကနေငှားရမ်းဥရောပနှင့်အမေရိကန်အတွက်အချို့သောနိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီများသည်။ အကြီးမြတ်ဆုံးတစ်ခုမှာ ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းသည့်ကုမ္ပဏီများက Google ဖြစ်ပါသည်။ အသစ်ကနေရာလွတ်ဘို့ငှားရမ်းသူဤမျှလောက်များစွာသောအခြားနိုင်ငံများမှသင်တန်းရှိပါတယ်။
တစ်ဦးထက်ပိုလတ်ဆတ်အဖြစ်စော်ဘွားအတွက်အလုပ်တစ်ခုရရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြောတခုရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် အလုပ်စတင်ရန် MBA ဘွဲ့ရပညာရေး။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကောင်းသောလမ်းသည်ဒေသခံပညာရေးရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးများထဲမှဒူဘိုင်းသို့မဟုတ်အဘူဒါဘီတက္ကသိုလ်ကနေဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ သငျသညျ Dubai Mall အတွက်အလုပ်တစ်ခုရနိုင်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်များအတွက်တကယ်ကြီးအအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အဖွင့်ဖို့ထူးချွန်ဆုံးလမ်းတစ်ခုမှာ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အဖို့ဖြစ်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်စျေးကွက်အလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့။ ယခုအချိန်တွင်အများကြီးရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်တောင်အာဖရိကကနေအလုပျသမား။ ကျနော်တို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အင်တာဗျူးအတွက်လမ်းလျှောက်အကြံပေးဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေစတင်ရန်။ updated ကိုယ်ရေးရာဇဝင်နှင့်အတူထွက်ခြင်းနှင့်စုဆောင်းခြင်းမန်နေဂျာနှင့်အတူစကားပြောကောင်းတစ်စိတ်ကူးတူသောပုံရသည်။
ဥပမာအားဖြင့်, ကျွမ်းကျင်သူများနိုင် ဒူဘိုင်းအတွက်ဆရာမအဖြစ်အလုပ်ရှာတွေ့။ ဤအချက်အလက်သင်ပေးခြင်းသည်သင်၏အလုပ်ရှာဖွေရေးစီမံခန့်ခွဲဖို့ဘယ်လိုသိသင့်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တ အကောင်းဆုံးနေရာ အလုပ်ရှာဖွေသူများသည်။ ဤအရပျကျိန်းသေအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အတိုကောက်ချက်အတွက် ယူအေအီးအတွက်ပါကစ္စတန်တို့အတွက်ဂျော့ဘ် သင်တို့အဘို့ကျယ်ကျယ်ပွင့်ကြသည်။ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ပါကစ္စတန်တို့အတွက်ဂျော့။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကျနော်တို့များမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းစျေးကွက်အတွက်ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီမှ CV တင်ပါနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်ကမ်းလှမ်းမှုကိုစောင့်ဆိုင်း။
သင်ကရှာတွေ့ချင်ပါနဲ့ ဒူဘိုင်းယောဘ? ဤစကားမှန်ပေမည်ဖြစ်သော်လည်းကျနော်တို့အသစ်တခုဖွင့်ဖို့ကိုသင်ကူညီပေးနိုင်ပါသည် 2018 အတွက်ယူအေအီးအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း!